Ongororo pfupi yebasa "Don Juan Tenorio" naJosé Zorrilla | Zvazvino Zvinyorwa
Ongororo pfupi yebasa «Don Juan Tenorio» naJosé Zorrilla
Carmen Guillen | | Type, Mabhuku, Literature, Theater
Nhasi Zuva reValentine, tinokuunzira ongororo pfupi yenyaya yemutambo werudo, kunyanya, yemutambo waakanyora Jose Zorrilla mu 1844, "Don Juan Tenorio". Kuti tinzwisise zvishoma nezve iri basa reinoshamisa genre, isu tichaenda kuziva zvishoma nezvemunyori wayo uye nenguva mariri.
1 Munyori uye mamiriro
2.1 Rimwe rebasa ...
Munyori uye mamiriro
José Zorrilla aive wemhuri yemafungiro ehumambo uye akatanga zvidzidzo zvake zvemutemo, izvo zvaakasiya. Akatanga kuzivikanwa mudenderedzwa rekunyora mushure mekurondedzera pamariro e Larra, mamwe mavhesi kumakuva murukudzo rwake. Zvinogona kutaurwa kuti ndiye mumwe wevanyori vashoma venguva iyoyo vakafarira mukurumbira vachiri vapenyu: akaenda kuFrance ndokugara kwechinguva muMexico. Basa rake, kutaura zvine mutsindo, rinotarisa pachinyakare kudanana.
Mutambo, uyo kunyangwe uchidanana mune zvakasikwa, unoitirwa mune dzakawanda dzemitambo mu Zuva revafi, Inotyora nemutemo wechivanhu wezvikamu zvitatu. Iyo inoratidzirwa nehuwandu hwakawanda hwezviito, zvinoita kunge zvine zita. Chimiro chayo chekunze chakakamurwa kuita zvikamu zviviri:
La chikamu chimwe gadzira kushamwaridzana nevanhu uye nerudo.
La chikamu chechipiri inotarisa zvakanyanya pa mweya wekunamata neunoshamisa.
Tichifunga nezve zvikamu zviviri zvakasiyana zvakasiyana, iro basa rakachena uye rinofungisisa rinoita nzira yaro.
Mativi ese ari maviri, rimwe nerimwe rinokura muhusiku humwe uye pane musiyano wenguva yemakore mashanu pakati pavo. Iri basa, rinoshuvira zvakapfuura (hunhu uye zvakajairika zvechinyakare zveRoma), iri muSpain yaCarlos V.
Su mutambi, Don Juan, iripo mu Anonyengera weSevilleIye anofarira, akasununguka murume wechidiki ari kunyengedza vakadzi, zvisinei nhamba, uyo pakupedzisira anorarama kusangana kunoshamisa nokudaro achiburitsa nguva yekupedzisira yebasa, ruponeso rwake kana kutukwa kusingaperi. José Zorrilla, kusiyana nebasa rebaroque, anotarisana nezverudo rwumwe chete uye anopa hunhu hukuru, mune iyi nyaya Don Juan, anopfidza uye anowana ruponeso kuburikidza nerudo.
Hunhu hwake hwechipiri ndihwo Don Luis Mejía, uyo Don Juan anopedzisira auraya mumutambo. Hunhu uhu hwaonekwa semumiriri wechivi chaDon Juan. Neichi chikonzero, kufa kwaLuis Mejía kunoratidzira kupera kwehupenyu hwake hwekare.
Mai Ines, hunhu hwakatarisana naDon Juan, ndiye anounza runako uye kusava nemhosva kubasa. Doña Inés ndiye anokotamisa huipi hwaDon Juan uye anoonekwa ari padhuze nehuMwari: mutumwa werudo anokwanisa kuita semurevereri pakati paMwari nenyika. Mariri, José Zorrilla anoedza kumiririra kutenda muruponeso rwemunhu, kuratidza kukosha kwainako kumunhu, hunhu hwerunako nekutenda. Zvakare mukana wekuwana rudo rwechokwadi.
Chiitiko kubva mukutamba "Don Juan Tenorio" inotungamirwa naBlanca Portillo
Rimwe rebasa ...
Bheji: Don Juan anobhejera naDon Luis Mejía, mukwikwidzi wake, kuti mukati memazuva matanhatu achanyengedza Doña Inés, mudzidzi mutsva ave kuda kuita sista, uye zvakare Doña Ana, uyo Don Luis ari kuzoroora.
Don Juan anozadzisa chinangwa chake, asi akawira kupenga murudo naDoña Inés, kumubata. Mutungamiriri, baba vaInés naDon Luis vanotsvaga kutsiva. Don Juan, mushure mekuyedza kuyananiswa navo pasina kubudirira, anovauraya uye anofanira kutiza kubva kuSeville. Ndiyo apo Don Juan anozivisa rudo rwake rwechokwadi kuna Doña Inés dambudziko risati rasvika. Saka iyi mitsara inozivikanwa: Ah! Hachisi chokwadi here, ngirozi yerudo, kuti pamhenderekedzo yakachena iyi mwedzi unopenya uye unofema zvirinani? ».
Rufu neruponeso: Panodzoka Don Juan makore mashanu gare gare kuSeville, kumba kwake, kumuzinda wake, anounganidza panton inogara makuva aDon Luis Mejía, Mutungamiriri, uye waDoña Inés, akafa nekusuwa. Pakupera kwekutamba, chifananidzo cheMutungamiriri chinoedza kukwevera don Juan kugehena, asi mhere-mhere yaDoña Inés inomureverera, nekudaro achiwana kutendeuka kwake neruponeso rusingaperi.
Nyaya yakanaka yerudo ... Pasina kupokana.
Zvinyorwa zveRomanticism zvakatisiyirei kuSpain?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Ongororo pfupi yebasa «Don Juan Tenorio» naJosé Zorrilla
Ndine makore gumi nemashanu uye ndiri kuverenga bhuku iri kuchikoro. Inonakidza kwazvo uye inotora kutarisisa kwangu kwenguva yakareba. Asi handidi Don Juan zvakanyanya nekuti anozvida uye anotenda kuti zvese zviri munyika zvinogona kutengwa. Zvakanaka, mumwe munhu ane maonero akapesana neni ndapota ndiudzewo mazwi ako pane izvi.
Ini handina kunyatsonzwisisa bhuku racho chaizvo, Don Juan aiziva here kuti zvemukati zvemukati zvaimugadza?
Mwana bastard akadaro
Tose tiri shishigang
Pindura Elbas Tardo
kune vanhu vakaita semi ndizvozvo isu takaita seizvi
Zvakanaka, ndiani mumwe? akadaro
Pindura kune Zvakanaka, ndiani mumwe?
ANANDIPA FLOGERA VERENGA UYE NDINOFANIRA KUZVIITA
.................................................. .................................................. .................................................. ......................................... akadaro
Ini ndine makore gumi nerimwe ekuberekwa ndakaiverenga mukirasi uye ivo vakandiudza kuti ndiongorore kuti ndedzipi zvinyorwa zvemhando, handisi kunyatsojeka
Mhinduro ku ................................................ .................................................. .................................................. ............................................
icho chinyorwa cherudo uye chinoshamisa
ELSA PORRICO akadaro
PULENTO EL Nhetembo, SOSAMAFIA
Pindura ELSA PORRICO
Iwo gumi emaraibhurari akanakisa muEurope